स्वार्थका रोटी सेक्न नपाएपछि टुटेको मेचीनगरको गठबन्धन ! – Janasamsad
स्वार्थका रोटी सेक्न नपाएपछि टुटेको मेचीनगरको गठबन्धन !
बिहिबार, आषाढ ११, २०७७ १८२६ २०
असार महिना कृषकले माना खाएर मुरी उब्जाउने बेला हो । त्यस्तै, असार १० भित्रमा गर्नुपर्ने अर्को चटारो स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १ वर्षमा हुने समृद्धिको खाका कोर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु हो ।
तर, धेरै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेनन् । त्यो गैर जिम्मेवारीपन मात्रै होईन, जनताको मतको अपहेलना भएको छ । स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षको योजना घोषणा पश्चात विकास निमार्ण, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारलगायत आम सर्वसाधारणको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन् । जुन विषयले आफ्नो क्षेत्रको समृद्धिको खाका निमार्ण गर्छ । तर, यस्तो भईरहेको छैन ।
झापाका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा ठूलो नगर मेचीनगर नगरपालिका हो । जहाँ करिब १ लाख २५ हजार जनसंख्या छ भने देशकै सबैभन्दा धेरै जातजातिको बसोबास भएको नगरले निर्धारित समयमा आ.व. २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेन । यसले गलत सन्देश मात्र प्रवाह गरेको छैन, जनप्रतिनिधिको नालायकीपनको पर्दा उदाङ्गो समेत पारिदिएको छ । जसले गर्दा मेचीनगरवासीको भाग्य भविष्यमा खेलबाड भइरहेको छ । यस्ता नालायकीपनको जिम्मेवार पक्ष भनेर नगरवासीले अब कसलाई औंला उज्याउने ?
प्रत्येक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेसमयमा भाँडभैलो हुने यो मेचीनगर नगरपालिकाको पुरानै रोग हो । त्यसैको निरन्तरतालाई यसवर्ष पनि ब्यँुताउन सफल बनेको छ मेचीनगर ।
वर्षको ३ सय ६५ दिनमध्ये मात्र ५ दिन नगरप्रमुख पक्ष र उपप्रमुख पक्षको सेटिङ्ग टुट्छ । अरु दिन राम्रै सेटिङ्गमा नगरका गतिविधि अघि बढ्ने गरेका उदाहरण नगरवासी माझ ताजै छन् । मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवैजना व्यापारिक पृष्ठभूमिका भएकाले राजनीति र आम जनभावनालाई नबुझेका पो हुन् की भन्ने चर्चा पनि एकातिर छँदैछ । नेकपा सरकारमा छ भने नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा । अरु पनि दल मेचीनगरमा छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म यिनको पृष्ठभूमि र कार्यसम्पादन हेर्दा खासै फरक पृष्ठभूमि र आस्थामा रहेजस्तो पटक्कै लाग्दैन । ठेक्कापट्टा, विकास, सेटिङ्गजस्ता नाफामूलक गतिविधिमा एउटै चोचो–मोचो मिलाएर कमिलाको ताँती जस्तै देखिन्छन् ।
आ–आफ्नो दाउमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु आम जनाताका लागिभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता आफ्नै लागि, त्यसपछि आफ्नो दल र त्यसका नेता, जसले हिजो गुन लगाएका थिए । त्यसका लागि एक–अर्कालाई दोष थोपरेर आफ्ना कार्यकताका सामु भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । कतै आ–आफ्ना स्वार्थका रोटी सेक्न नपाएकै कारण त होईन मेचीनगरका जनप्रतिनिधिहरुबीच गठबन्धन टुटेको ? नगरको बजेट नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भलाई अहिले यी र यस्तै अनेकन कोणबाट प्रतिक्रियाहरु सहतमा आएका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिकामा नेकपाको बहुमत छ, अंक गणितीय हिसाबमा । तर, यिनका जनप्रतिनिधि हेर्दा १ हजार ९६ दिन, प्रतिपक्ष काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको झोले भए । झोले भएर आफ्नो झोला भरे । त्योसमय हिजो त्यहाँ पठाउने पार्टी र मतदातालाई सम्झन समेत चाहेनन् । त्यसैको परिमाण स्वरुपमा आज एकमतका साथ जनताको पक्षमा बोल्ने आँट छैन् ।
मेचीनगरमा बेला–मौकामा मेयर विमल आचार्य उकुर्जीको प्रचार–प्रसार गरिरहनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘नेकपाले काम गर्ने दिँदैन, नेकपाको बहुमत छ, यस्ता प्रश्नले नगरवासीले मेयर कमजोर की बलियो भनेर बुझ्ने ?’
त्यस्तै, उपमेयर पनि के कम जनताको भावना मेयरले बुझे पो काम गर्न सकिन्छजस्ता गुनासोका पोका खोल्दै आएको लामोसमय भयो । एकले अर्कामाथि दोष थोपरेर नगर र नगरवासीलाई भ्रमको खेती नगर्नुहोस् । इतिहास साक्षी बन्नेछ । यो अवधिसम्म तपार्इँले नेतृत्व गरेको नगरका विभिन्न गतिविधिले सन्तुष्ट हुने ठाउँ कमै देखिन्छ । विभिन्न भ्रमपूर्ण सूचना आफ्ना हनुमानहरुलाई प्रचार गर्न लगाउँदैमा सफल बन्न सकिँदैन भन्ने कुराको राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधानले असार १ं० गतेभित्रमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्न पाईन्छ ?
बजेटमा लडाईँ किन ? सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुकोे एउटै उद्देश्य होईन समृद्धि नगर निमार्ण गर्ने ? विभिन्न उपसमिति बनेका छन् तर, ती समितिले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन, किन ? तपार्इँ जनप्रतिनिधि पहिलो भाग्यमानी, जसले राज्य कोषबाट प्रत्येक महिना सेवा प्राप्त गर्ने । तपाईँ जनताको सेवक होइन, तलबदार कर्मचारी हो ।
राजनीतिक दलको भूमिका के ? आ–आफ्ना दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग सेटिङ्गमा कार्यसम्पादन गर्ने ? आम जनताका लागि अभिभावकत्व गर्न नसक्ने ? इमान्दारीपूर्वक दिशा निर्देश गर्न नसकेपछि सामाजिक सञ्जाल र आफ्नो अनुकूलताका सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने ? यो कदापी मान्य हुनेछैन ।
अन्ततः तत्काल नगरको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नगरप्रमुखले सक्नुपर्छ । यदी नगरप्रमुखको नगर र नगरवासीको हितमा कार्य योजना छ भने त्यो अमूर्त ढङ्गबाट होईन, नगरवासीले बुझ्ने गरी लिखित रुपमा आउनु पर्यो । पटक–पटकको रोईलोले कालु र बाघको कथा जस्तो नबनोस् ।